Cabdulqaadir Maxamed Mursal: "Xiddig ka baxay warbaahinta Soomaalida"
Mursal ayaa bilihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay dalka Mareykanka.
Lixdan sano ka hor iyo sida carruurta Soomaalida ay u ciidi jireen
Muslimiinta India oo haatan qaba cabsi aan hore u soo marin
Soddon sano ku dhawaad iyo 850 markhaati ah, 7000 oo dukumenti, sawirro iyo muuqaalo duuban oo la hor keenay ka dib, ayaa maxkamad ku taal dalka India cidna ba ku weyday dembi ah inuu gubay masaajid la dhisay qarnigii 16-aad oo ay kooxo Hindu ahi weerareen oo ku yaal magaalada [Hindu-ga u] barakaysan ee Ayodhya.
TOOS Muqdisho: Sarkaal kufsi gaystay oo dil lagu xukumay
Hadal hayn ka dhalatay ereyga "InshAllah " ee uu isticmaalay Joe Biden
Qaar kamid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn u hadal haya ereyga 'Inshaa Allah' ee uu isticmaalay musharraxa madaxtinnimada ee xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka Joe Biden.
Sucuudiga oo oglaaday in haweenku ciyaaraan Golf-ka
Sucuudiga ayaa u diyaar garoobaya marti gelinta tartankii u horeeyey ee ciyaarta Golf-ka ee haweenka oo heer caalami ah oo markii uu horaysay lagu qaban doono dalkaas bisha Noofember ee soo socota.
Trump oo weerar hor leh oo afka ah ku qaaday Ilhaan Cumar
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markale weerar afka ah ku qaaday Ilhaan Cumar.
1 Oktoobar 2020
"Xilliggaas wax dagaal ah ma jirin, ma aanan heli wax tababar militari ah"
Dean Nicholson oo horay u ahaa kubadda Rugby-ga u ciyaara Scotland, ayaa la kulmay saaxiib noloshiisa qaali ku ah xilli uu baaskiil ku wareegayay adduunka.
30 Sebtembar 2020
Xiddigta dagaalka kula jirta Bollywood
Go'aan laga soo saaray dacwad loo heystay mas'uuliyiin lagu eedeeyay burburinta masaajid
Muuqaal, Muuqaal: Maansada guurka ragga lacagta leh lagu amaanay, Muddada 4,22
Ismahan Araweelo ayaa BBC-da uga warantay sababta ay ugu amaanto maansooyinkeeda guurka ragga lacagta leh,Fadlan ra’yigaagana ka soo dhiibo.
31 Agoosto 2020
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 1 Oktoobar 2020
Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 1 Oktoobar 2020
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 1 Oktoobar 2020
Xiga Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 2 Oktoobar 2020
Ra'iisul Wasaaraha Cusub ayaa sheegay inuu dhawaan soo dhisi doono Xukuumad tayo leh.
Soomaaliya ayaa dhawaan ku biirtay hey'adda dalxiiska adduunka
Liis ka kooban 138 waddan ayey Soomaaliya uga jirtaa kaalinta 136-aad.
Maxamed wuxuu muddo toban ah kusoo dhex jiray siyaasadda xisbiga Dimuqraadiga.
Maxamed Xuseen Rooble waa Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in baarlamaanka uu hortago kana akhriyo qorshihiisa si codka kalsoonida ay u siiyaan.
"Ma ahi dilaa, laakiin markii la i kaa barayay ayaa lagu baray inaan dilaa ahay. Ma doonayo inaan ka hadlo siyaasad, laakiin aan waqti idin raadiyo dhamaantiin, aan wada shaahno waxaana idinkaga sheekaynayaa gabayada," ayuu yiri isaga oo si tartiib ah u hadlaya islamarkana dhaoola cadeynaya.
Laga bilaabo Sucuudiga ilaa Imaaratka Carabta, culimada ku sugan halkaas waxay u muuqdaan kuwa ka hadlaya xiriirka Israa'iil iyo carabta isla markaana xayeysiinayo heerkii ugu sarreeyay si ay u xoojiyaan saameynta ha'yadaha diinta ee dalalka Carabta.
Waa arrin si weyn looga war dhowrayo waxa uu baarlamaanku ka yeeli doono heshiiskaan laga gaaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya .